Okuncinci okwaziwayo kwihlabathi loNcwadi | Uncwadi lwangoku
Kithina, umhlaba woncwadi yinto evulekileyo ngakumbi, kungcono, kuba sithanda ukubuza malunga neendaba ezintsha, idatha engaziwayo evela kubabhali kunye nolunye ulwazi olufanelekileyo olunokuthi luqaphele ukuba igama alizange lisasazeke. enye.
Kwiintsuku ezidlulileyo ndafumanisa inqaku endilifumene linomdla kakhulu kwiwebhusayithi yePapel en Blanco. Ijongana neyona incinci eyaziwayo kwihlabathi loncwadi, oko kukuthi, izinto mhlawumbi ongazaziyo malunga nehlabathi leeleta kunye nobugcisa ngokubanzi. Namhlanje ndikuzisela inqaku ngenqaku into echazwe apho kwaye ndikushiyela owona mthombo wokuqala xa ufuna ukuwujonga.
Mntwana otyheli, yapapashwa ngo-1895, Yayiyinto yokuqala yokuhlekisa embalini. Ungowokuqala ukusebenzisa amaqamza entetho njengendlela yokwenza abalinganiswa bazivakalise.
Iphephandaba lokuqala embalini, Imizuzu yoSuku waseRoma, epapashwe ngo-59 BC, Sele iqulethe ezinye iindaba ezisuka entliziyweniOko kukuthi, i-rumorology malunga namanani oluntu.
La inoveli ende kunazo zonke kwimbali inamaphepha ayi-16.000, kunye nombhali wayo, UHenry Darger, kuthathe iminyaka esi-7 ukuyibhala. Ibizwa ngokuba sisihloko Ibali leVivians, kwinto eyaziwa ngokuba yiRealms ye-Unreal, malunga neGladeco-Angelinian War-Storm ebangelwe yimvukelo yamakhoboka abantwana.. Efunyenwe emva kokufa kwakhe, umsebenzi kaDarger uye waba yimizekelo ebalaseleyo yobugcisa bangaphandle.
Oonobumba abade kunabo bonke yiKhmer evela eKhambodiya, enoonobumba abangama-74.
El incwadi encinci emhlabeni yibhayibhile encinci kangangokuba amagama ayo angama-300.000 anokulingana kwi-0,5 yeemilimitha kumphezulu wesilicon. Ngamanye amagama, akunakwenzeka ukuba uyifunde ngaphandle kwemicroscope. Yenziwe ngoososayensi bakwa-Israeli e-Haifa Institute of Technology besebenzisa imiqadi yamasuntswana abizwa ngokuba zii-gallium ions.
Kukho iiQuixotes ezingaphefumlelwanga. Eyona idumileyo yapapashwa ngo-1614 phantsi kwesihloko esithi: Umthamo wesibini wesidwangube esikrelekrele uDon Quixote de la Mancha, oqulethe ukuphuma kwakhe kwesithathu kwaye uyinxalenye yesihlanu yeziganeko zakhe. Yenziwe ligqwetha u-Alonso Fernández de Avellaneda, inzalelwane yedolophu yaseTordesillas.
NgokweForbes, Yeyona noveli ithengwa kakhulu Imbali yezixeko ezibini, de UCharles Dickens, iikopi ezingaphezu kwezigidi ezingama-200. Kwamanye amanqaku, nangona kunjalo, sifunde ukuba inoveli ethengiswa kakhulu yile yeCervantes: "UDon Quijote waseLa Mancha".
Ngelixa igama layo elaziwa kakhulu mein Kampf (Umlo wam), incwadi ebhalwe ngu Adolf Hitler isihloko sayo "Iminyaka emine yokulwa ubudenge, ubuxoki nobugwala ».
Ngaphambi kokuvela komatshini wokushicilela, Iincwadi ezininzi bezinokwahlulahlula phakathi kwezahluko, naphakathi kwemihlathi okanye amagama. Oko kubandakanya neBhayibhile, eyayingahlukaniswanga ngaphambili kwiivesi: owokuqala ukuqala ukuyilungiselela izahluko yayinguLanfranc, umcebisi kuWilliam uMoyisi, ngenkulungwane yeshumi elinanye. Ulwahlulo lwangoku lubangelwa UStephen Langton, Unjingalwazi eSorbonne, owakwaziyo ukunyanzelisa isakhiwo sakhe esitsha eParis.
Kuyakholelwa ukuba ULeonardo da Vinci wabhala ngendlela eqikelelayo (njengesipili, kwaye ukusuka ekunene ukuya ekhohlo) ukuze angasebenzisi i-inki kwinto ebesele ibhaliwe, kuba wayeyinxele. Kwaye ukubethela izichazi zakho.
UFrank baumUmbhali we IWizard emangalisayo yeOz, waphefumlelwa ukuba abhaptize obo bukumkani kwidrowa yekhabinethi efayilwayo enelebheli yoku-alfabhethi ebonisa "OZ."
Kwi 1898, UMorgan robertson esidlangalaleni Amampunge, inoveli echaza ukutshona kwenqanawa enkulu ebizwa ngokuba yiTitan kuhambo lwayo lokuqala ukusuka eLondon ukuya eNew York. Kwiminyaka eli-14 kamva yaba yinyani nge Titanic.
NgokweRoyal Spanish Academy (RAE), amagama ama-5 asetyenziswa kakhulu kwiSpanish yile ndlela: "de", "la", "que", "el", "en". Kwaye elona gama lisetyenziswayo ngu "todo".
Nanku umthombo wokuqala apho ungafunda khona ezinye "izinto ezibangela umdla" kwihlabathi lobugcisa ngokubanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Okuncinci okwaziwayo kwihlabathi loNcwadi